Xog: Maxay tahay sababta uu Sanbaloolshe uga hor istaagay Raiisul Wasaaraha inuu ka jawaabo arrinta ku aaday Muwaadinka Itoobiya lagu wareejiyay,? – Hornafrik Media Network
Xog: Maxay tahay sababta uu Sanbaloolshe uga hor istaagay Raiisul Wasaaraha inuu ka jawaabo arrinta ku aaday Muwaadinka Itoobiya lagu wareejiyay,?
By HornAfrik	 Last updated Aug 30, 2017
Dood ka socotay Muqdisho ayaa wariye ka tirsan Telefeshinka Aljazeera waxa uu ku waydiiyay Raiisul Wasaare, Xasan Cali Khayre su’aal la xiriirtay waxay kaga jawaabayaan Warsaxaafadeed ay ONLF soo saartay oo ay ku eedeeyasay Dowladda inay Muwaadin Soomaali ah oo Ururkaasi ka tirsan ku wareejisay Itoobiya waxa is hortaagay Su’aashaas inuu ka jawaabo Agaasimaha Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed, C/laahi Sanbaloolshe.
Sanbaloolshe oo fadhiyay Goobta Dooda ayaa sheegay in Su’aashaasi ay Dowladda uga jawaabi doonto Goob Munaasib ah waqti ku haboon, isla markaana uu isagu afduubay Dowladda inaysan ka jawaabin Suaashaasi, Taasoo ka yaabisay Wariyayaashii Goobta fadhiyay.
Raiisul Wasaare Khayre ayaa isna qiil ka dhigtay arrintaasi oo u sheegay Wariyayaasha inay Sirdoonka xaq u leeyihiin inay afduubaan Dowladda oo ay waxyaabaha qaarkood tahay in iyaga looga dambeeyo. Wuxuuna halkaasi kaga gudbay Jawaabta Su’aashaasi oo Dadka Soomaaliyeed oo dhan ay sugayeen.
Sanbaloolshe muxuu u hor istaagay in Su’aashaas laga jawaabo,?
Sanbaloolsho sababta ugu wayn ee Kulanka loo keenay waxay ahayd in Su’aashaas marka ay Wariyayaashu waydiiyaan uu isagu hor istaago in laga jawaabo, maadaama aysan Dowladda Somalia u hayn Jawaab Shacabka Soomaaliyeed.
Muwaadinka Soomaaliga ah ee C/kariin Qalbi Dhagax waxaa soo qabtay Ciidanka NISA ee Galmudug, kadibna Muqdisho ayaa la keenay, Waxaana lagu xiray Xabsiga NISA ee Madaxtooyo, halkaas oo kadib looga dhoofiyay Itoobiya, mana ku jiro Muwaadinkan hadda Gacanta Dowladda Somalia,
Sanbaloolshe waxa uu gacan saar dhow la leeyahay Itoobiya, inuu noqdo Taliyaha NISA-na Itoobiya door ayeey ku lahayd, waana sababta ay Danaha Itoobiya hadda u noqdeen kuwo lama taabtaan ah.
Ururka ONLF ee Soomaali Galbeed Warsaxaafadeed ay soo saareen waxay ku eedeeyeen Dowladda Somalia inay Muwaadin Soomaali ah oo Ururkooda ka tirsanaa u gacan galiyeen Itoobiya.
Raiisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo beeniyay inuu isku shaandhayn ku samaynayo Golaha Wasiiradda.
Golaha Ammaanka oo muddo kordhin u sameeyay howl galka AMISOM